अस्पतालको सैया बाट ज्ञानेन्द्र शाहीः मा'र्ने नै योजना रहेछ, सिटमुनि लुकेर बाँचेँ ! —
असोज १२, २०७६ काठमाडौं । आफूलाइ भ’ष्ट्राचार वि’रोधी अभियान्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहिले आफूलाइ मा’र्ने अभिप्रयाले हिजो ढु’ङ्गामुडा सहित आ’क्रमण भएको बताएका छन् । विना हा’तहति’यार घुम्न, डुल्न र बोल्न नपाउने कस्तो लोकतन्त्र भनी उनले प्रश्न गरे । आक्र’मणपछि काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा उप’चार गराइरहेका शाहीलाई भेट्न गएका विश्लेषक एवं अभियान्ता दिलनिशानी मगर र पुण्य गौतम लगायतको टोलीसँग उनले आफूलाई सिद्या’उने निय’तले आ’क्रमण भएको बताएका हुन् ।
‘म बोल्नको लागि चितवन गएको थिएँ, माइक्रो बसमै आ’क्रमण भयो, सीटमुनि बसेर बाँचें’ शाहीको भनाइ उद्धृत गर्दै दिलनिशानीले लोकान्तरसँग भने, ‘विना हातहतियार हिँडडुल गर्न नपाउने पनि कस्तो लोकतन्त्र हो ?’ नेकपा निकट कार्यकर्ताको आक्र’मणमा परि घा’इते भएका शाहीको ट्रमा सेन्टरमा उपचार भइरहेको छ । टाउकोमा गहिरो चो’ट लागेका कारण केही दिन अस्पतालमै बस्नुपर्ने अवस्था रहेको नेपालका लागि नेपाली अभियानका डा. सुरेन्द्र भण्डारीले जानकारी दिए । उनले आफ्नो उप’चार खर्चका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको दिलनिशानीले बताए । शाहीमाथि भएको आक्र’मणको सामाजिक सञ्जालमा चर्को वि’रोध भइरहेको छ । ‘ज्ञानेन्द्र शाहीको विचार र उनको शैलीसँग सबभन्दा बढी मैले फरक मत राख्छु तर उनीमाथि भएको आ’क्रम’णको म निन्दा गर्न र उनलाई भेट्न अस्पताल गएको हुँ,’ दिनलिनशानीले भने । -लोकान्तर बाट